Ogaden News Agency (ONA) – Ciidamada Israa’iil oo Qafaashay 800 oo Dhalaan Falastiiniyiin Ah.
Ciidamada Israa’iil oo Qafaashay 800 oo Dhalaan Falastiiniyiin Ah.
Madaxa hay’adda arrimaha maxaabiista Falastiin Ciisa Qaraaqic, ayaa sheegay in Israa’iil ay bilawgii sanadkan ilaa hadda ay xoog ku qafaasheen caruur tiradoodu dhan tahay 800.
Caruurtan ayaa la sheegay in Ciidamada Israa’iil ay siyaabo kala duwan u qafaasheen iyagoo qaarkooda loo geystay tacadi oo lagu furay Rasaas Nool iyo waliba xadgudboyo kale oo ka baxsan bani’adanimada.
Bayaan uu soo saaray Madaxa Hay’adda arrimaha maxabista Falastiin Ciisa Qaraaqic, ayuu ku sheegay in caruurtaasi qaar ka mid ah ay qabaan dhaawacyo halis ah oo loo geystay markii la qafaalanayay,wuxuuna cadeeyay in xadgudubyada ay Ciidamada Israa’iil kula kacaan dadyowga reer Falastiin ay tahay mid cad ,iyadoo Caruurta Falastiin ay si joogta ula kulmaan dhibaatooyin kala duwan oo uga imanaya dhanka Ciidamada Israel.
Wuxuuna ku baaqay in mujtamaca dawliga iyo ururada kale ee u dooda xuquul insaanka ay si deg deg ah wax uga qabtaan dhibaatoyinkaasi aan soo carabaabnay ee Israa’iil ay kula kacayso dadka reer Falastiin,talaabadasi oo ka dhan ah qanuunka caalamiga ah.
Madaxa hay’adda arrimaha maxabista Falastiin Ciisa Qaraaqic, wuxuu ka loo cadeeyay in Makmadadaha Israa’iil ay ku ganaaxaan Caruurta falastiin %100 lacag aad u tira badan oo aan awoodin inay iska bixiyaan isla markaana lagu xukumo xabsiyo dhaadheer oo aan xamili Karin caruurtaasi aan qaan gaadhka aheyn.